Otu esi emepụta VPN nke gị na Ubuntu, Debian na CentOS | Site na Linux
Luigys toro | | GNU / Linux, Na-atụ aro, Netwọk / Sava, Nkuzi / Ntuziaka / Atụmatụ
Site na ngbanwe mgbe niile nke obodo na mba m na-eme n'oge na-adịbeghị anya, aghaghị m iji ọtụtụ netwọk Wi-Fi n'efu (ọbụlagodi ugbu a ejikọrọ m na wifi na m nwetara igodo ahụ maka ya Aircrack-ng, Airmon-ng, airdump-ng, aireplay-ng nke etinyeworị na Kali Linux), Nsogbu bụ na njikọ ndị a nwere ike imebi ozi m ma anyị amaghị onye enwere ike ijikọ ma mee ka m mara na netwọkụ ahụ. Ihe ngwọta nke nsogbu a bụ nke e welitere ogologo oge gara aga site na ka anyi jiri Linux en Otu esi sọfụ n'enweghị nsogbu na netwọk Wi-Fi, ma enwere kwa ike idozi ya site na iji VPN, nke enwere ọtụtụ n'efu ma kwụọ ụgwọ, dị mfe iji ma wụnye, nke ọ bụla nwere uru na ọghọm ya, mana anyị nwekwara ike mepụta ihe nkesa VPN anyị na Ubuntu, Debian na Centos.
N'ịchọ ihe ngwọta maka nsogbu a na ibute ụzọ site na iji VPN nke ga-enye m uru ndị ọzọ, agbalịrị m ịchọta edemede nke na-enye anyị ohere iwu ihe nkesa VPN na-akpaghị aka na obere mmekọrịta na onye ọrụ.
1 Kedu ihe ederede nhazi ihe nkesa?
2 Njirimara nke VPN maka edemede nhazi nkesa IPsec
3 Okwey n'elu IPsec nkesa nhazi akwukwọ chọrọ
4 Ingwụnye VPN n'elu akwukwọ nhazi nkesa IPsec
4.1 Installwụnye VPN n'elu ihe nkesa nkesa IPsec na Ubuntu na Debian
4.2 Wụnye VPN n'elu ihe nhazi nkesa IPsec na Centos
5 Mkpebi na VPN maka ihe nhazi nkesa IPsec
Kedu ihe ederede nhazi ihe nkesa?
Ọ bụ shei edemede nke na-enye ohere hazie ihe nkesa VPN na IPsec na Ubuntu, Debian na CentOS ngwa ngwa na mfe, gbakwunyere na-akwado IPsec / L2TP na Cisco IPsec ogbugba ndu. Onye ọrụ ahụ kwesịrị ịnye onwe ha nzere VPN ma hapụ edemede ahụ ka ndị ọzọ.
Ihe nkesa Okwey n'elu IPsec Ọ na-ezipụ okporo ụzọ netwọkụ, ka enwere ike ịnụ data mgbe enwere nkwukọrịta n'etiti onye ọrụ na ihe nkesa VPN. Nke a bara uru karịsịa mgbe ị na-eji netwọkụ na-enweghị nchekwa, dịka ọmụmaatụ n'ụlọ ahịa kọfị, ọdụ ụgbọ elu, ma ọ bụ ụlọ nkwari akụ.
Ederede na-eji Libreswan nke bụ mmejuputa iwu-nke IPsec maka Linux y xl2tpd kedu ihe bụ L2TP na-eweta.
Enwere ike iji edemede ahụ na sava ọ bụla raara onwe ya nye ma ọ bụ Virtual Private Server (VPS). Ọzọkwa, enwere ike iji ya dị ka "data njirimara" nke Amazon EC2 Maka mmalite nke ihe atụ ọhụrụ, njirimara a na-eme ka ọ dị mma n'ihi na ọ na-enye m ohere ịnweta VPN ma na-agba ọsọ n'oge ọ bụla ma na-enyere m aka irite uru nke onyinye Amazon nke otu afọ na-enweghị VPS ha.
Njirimara nke VPN maka edemede nhazi nkesa IPsec
Nhazi nke VPN akpaghị aka na ihe nkesa IPsec, na-enweghị enyemaka onye ọrụ
Na-akwado usoro kachasị ọsọ IPsec/XAuth ("Cisco IPsec")
Dị Docker oyiyi site na ihe nkesa VPN
Na-ekpuchi okporo ụzọ VPN niile na UDP - achọrọghị usoro ESP
Enwere ike iji ya dị ka "data njirimara" maka ọnọdụ Amazon EC2 ọhụrụ
Na-akpaghị aka chọpụta IP ọha na IP na nkeonwe nke ihe nkesa
Gụnyere isi IPTables iwu ma nye gi ohere idozi ihe sysctl.conf
Nwalere na Ubuntu 16.04 / 14.04 / 12.04, Debian 8 na CentOS 6 & 7
Okwey n'elu IPsec nkesa nhazi akwukwọ chọrọ
Ihe nkesa raara onwe ya nye ma obu Virtual Private Server (VPS) choro, obu ezie na akwadoro iji ihe omuma nke Amazon EC2, na-eji otu n'ime AMI ndị a:
Ubuntu 16.04 (Xenial), 14.04 (Trusty) ma ọ bụ 12.04 (Kpọmkwem)
Debian 8 (Jessie) EC2 Foto
CentOS 7 (x86_64) na mmelite
CentOS 6 (x86_64) na mmelite
Ingwụnye VPN n'elu akwukwọ nhazi nkesa IPsec
Installwụnye VPN n'elu ihe nkesa nkesa IPsec na Ubuntu na Debian
Ihe mbụ ị kwesịrị ime bụ imelite sistemụ gị, maka iwu a ka ị ga-eme apt-get update && apt-get dist-upgrade na reboot.
Nzọụkwụ a abụghị iwu, mana ọ na-atụ aro ka eme ya.
Iji wụnye VPN, biko họrọ otu n'ime nhọrọ ndị a:
Nhọrọ 1: Mee nzere VPN na aghara, nke a ga-elele anya mgbe nwụnye zuru ezu
Nhọrọ 2: Dezie edemede na-enye gị onwe gị VPN nzere
wget https://git.io/vpnsetup -O vpnsetup.sh nano -w vpnsetup.sh [Jiri ihe ụkpụrụ gị dochie: YOUR_IPSEC_PSK, YOUR_USERNAME na YOUR_PASSWORD] sudo sh vpnsetup.sh
Nhọrọ 3: Kọwaa nzere VPN dị ka mgbanwe gburugburu
# A ghaghị itinye ụkpụrụ niile na 'otu okwu'
# Ejila mkpụrụ edemede ndị a n'ime ụkpụrụ: \_ "'
wget https://git.io/vpnsetup -O vpnsetup.sh && sudo \_ VPN_IPSEC_PSK ='your_ipsec_pre_shared_key' \_ VPN_USER ='aha_vpn_username' \_ VPN_PASSWORD ='Okwu_vpn_password' sh peeji nke
Wụnye VPN n'elu ihe nhazi nkesa IPsec na Centos
Ihe mbụ ị kwesịrị ime bụ imelite sistemụ gị, maka iwu a ka ị ga-eme yum update na reboot.
Soro otu usoro ahụ dị ka Ubuntu na Debian, mana dochie anya ya https://git.io/vpnsetup site https://git.io/vpnsetup-centos.
Mkpebi na VPN maka ihe nhazi nkesa IPsec
Ọfọn, ozugbo awụnyere VPN anyị, anyị ga-ejikọ ya site n'aka onye ahịa VPN.M na-atụ aro ka anyị jiri OpenVPN, nke anyị nwere ike iwunye ya na njikwa ngwugwu nke nkesa anyị. N'ihe banyere Debian na nkwekọrịta anyị nwere ike ime ya n'ụzọ ndị a:
sudo apt-nweta wunye openvpn
Nke a bụ ezigbo ihe ngwọta iji jikọọ na ịntanetị n'ụzọ dị nchebe ma nwee nke anyị VPN nke nwekwara ike iji ya
Nweta ọrụ ma ọ bụ netwọkụ ụlọ mgbe ị na-ejegharị.
Zoo data nchọgharị.
Sitesbanye saịtị saịtị-egbochi.
Na ọtụtụ ojiji ndị ọzọ
Ma nke a bụ ụmụ okorobịa m nwere olile anya na ị ga-anụ ụtọ ya ma nweta ya. Ọ bụrụ na ihe a niile dị ka ihe gbagwojuru anya na ị na-ahọrọ ime ka ọ dị mfe, ịnwere ike iku VPN oge niile Ọrịa, nke na mgbakwunye na inwe ezigbo echiche, na-enye ezigbo onyinye maka ndị ọrụ ọhụụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » GNU / Linux » Otu esi emepụta ihe nkesa VPN gị na Ubuntu, Debian na CentOS
Gịnị mere ha ji gafee akụkụ ebe ọ kwenyere na ọ dara mpụ? jajajjajajajjaja
Ndewo enyi, agbalịrị m ịwụnye VPN na ihe atụ Amazon na Ubuntu, ma ugbu a ihe m na-enweghị ike ime iji jikọọ na VPN arụnyere, echere m na ọ dị mkpa ịgbakwunye ọdụ ụgbọ mmiri na ihe atụ n'oge m nwetara na ha bụ ndị a: Maka PPTP ị kwesịrị mepee TCP n'ọdụ ụgbọ mmiri 1723 ma mepekwa protocol na ID 47 (GRE).
Maka L2TP ị ga-emepe TCP ọdụ ụgbọ mmiri 1701; Ọ bụrụ na ị ga-eji IPSec, ị ga-emeghe UDP n'ọdụ ụgbọ mmiri 500 na ogbugba ndu nke ID 50 (IPSec ESP) na 51 (IPSec AH), ozugbo m kwukwara ha m nyochaa na netstat -ntpl na ihe atụ mana ọ naghị Bido nọ n'ọrụ, ị nwere ike inye m aka biko?
Maka sava nwere firewall mpụga (dịka ọmụmaatụ EC2), ị ga-emepe UDP ọdụ ụgbọ mmiri 500 na 4500, na TCP ọdụ ụgbọ mmiri 22 (maka SSH).
Iji mepee ọdụ ụgbọ mmiri ndị ọzọ na sava ahụ, dezie /etc/iptables.rulesy / ma ọ bụ /etc/iptables/rules.v4(Ubuntu / Debian), ma ọ bụ / wdg / sysconfig / iptables (CentOS). Ma malitegharia Server ahụ, ọ bụ ezie na EC2, ihe dị mma dị na firewall mpụga.
"Nnwere onwe nke Usoro ahụ dabara adaba na Uto nke Organizationtù", nkwupụta magburu onwe ya.
Ejisiri m ike wụnye ya ma ọ na - arụ ọrụ na Iphone na gam akporo, mana amaghị m otu esi eji emegheVPN na Linux dị ka onye ahịa.
Ihe nkesa m tinyeworo na Ubuntu 16.04.
Ndewo, kedu ka m ga esi eme ya ip na di omimi?
Zaghachi na rock-668
denye aha noip.com na nsụgharị n'efu.
Ndewo, aha m bụ Oscar, etinyewo m sava VPN a na sava Linux m na VPS, na nyocha nchekwa m mgbe awa 24 gachara, bụ na ọ na-eme mwakpo, Smurf, na-enyocha nyocha ma na-anwa igbochi data, ọ dị ka ọ ga-enwe ike itinye aka igodo niile na-eji usoro iwu na-enweghị nchebe, ya bụ, njikọ ọ bụla nke na-anaghị eji izo ya ezo, ozugbo m chọpụtara, m mechiri njikọ VPN m ma tọgharịa VPS, ebe m mepụtara oge iweghachi tupu ịmalite usoro a.
Ana m ekpughe ihe a niile ka onye edemede na / ma ọ bụ onye na-agụ isiokwu a gụọ ihe ndị a dị njọ mgbe ị na-etinye sava VPN a, m na-ekwu ya niile n'okwukwe dị mma, ana m ekele onye edemede maka iwepụta oge ya na ederede ederede a.
mgbe m mere ifconfig tun0 o na-enye m njehie a
njehie na-eweta ozi interface: Ngwaọrụ ahụghị
Ugbu a ka m matara ihe kpatara na anaghị m eji VPN…. n'ihi na ọ dịghị mfe na ọ na-agwụ ike ịhazi ya. Ọ bụ na ọnweghị ụzọ dị mfe na nghọta karịa ime ya?